လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကိုအလွှာပေါင်းစုံတွင်သုံးသည်, စျေးကွက်ထဲသို့မ ၀ င်မီဤအီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်အများစုကိုအဖုံးအုပ်ရန်လိုသည်. ယခုခေတ်, အသုံးများသောဖုန်စုပ်စက်သုံးပစ္စည်းများမှာ magnetron sputtering vacuum coating machine ဖြစ်သည်. ဒီမှာ, ကျွန်ုပ်တို့ လာ၍ sputtering တွင်သုံးသောပစ်မှတ်များကိုကြည့်ပါ။ အများအားဖြင့်, ကျွန်ုပ်တို့သုံးသောပစ်မှတ်ပစ္စည်းများသည်အမျိုးအစားသုံးမျိုးထက်မပိုပါ: သတ္တုပစ်မှတ်များ, အလွိုင်းပစ်မှတ်များ, နှင့်ပေါင်းစပ်ပစ်မှတ်များ.
Hard Disk များတွင်သုံးသောပစ်မှတ်များစွာရှိသည်. မှတ်တမ်းတင်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အလွှာပေါင်းများစွာရှိသောရုပ်ရှင်များကိုတပ်ဆင်ထားသည်. ရုပ်ရှင်တစ်ခုစီတိုင်းမှာသူ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဆောင်ချက်ရှိတယ်. အောက်ဆုံးအလွှာတွင်, 40nm အထူခရိုမီယမ် (သို့) ခရိုမီယမ်အလွိုင်းကိုကော်နှင့်ခံနိုင်ရည်အားကိုမြှင့်တင်ရန်သွန်းလုပ်လိမ့်မည်. , ထို့နောက်အလယ်၌ 15nm ထူသော cobalt ခရိုမီယမ်အလွိုင်းဖြင့်အုပ်ထားသည်, ၎င်းနောက် ၃၅nm အထူရှိသော cobalt အလွိုင်းဖြင့်အုပ်ထားပါသည်, သံလိုက်ပစ္စည်းအဖြစ်, ဤပစ္စည်းသည်သံလိုက်ဓာတ်လက္ခဏာများနှင့်အနှောင့်အယှက်အနိမ့်လက္ခဏာများကိုအပြည့်အဝရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည်, နောက်ဆုံးတွင် 15nm အထူကာဗွန်ဖလင်ဖြင့်အုပ်ထားသည်.
သံလိုက်ခေါင်း၏ sputtering ပစ်မှတ်ကိုအများအားဖြင့်သံ-နီကယ်အလွိုင်းကိုသုံးသည်, ၎င်းနောက်ဒြပ်ပေါင်းအသစ်အချို့ကိုနောက်ပိုင်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်, iron nitride ကဲ့သို့, သံ tantalum nitride, သံအလူမီနီယမ်နိုက်ထရိတ်, စသည်တို့, ၎င်းတို့အားလုံးသည်အရည်အသွေးမြင့်သံလိုက် dielectric film ပစ်မှတ်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်.
CD discs များသည်အလူမီနီယံဖလင်ကိုရောင်ပြန်အလွှာအဖြစ် သုံး၍ ပလပ်စတစ်အစိပ်အပိုင်းများပေါ်တွင်ကပ်ထားလိမ့်မည်, CDROM နှင့် DVDROM discs များအတွက်, အလူမီနီယမ်ဖလင်ကို သုံး၍ မရပါ, ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ discs တွေမှာဆိုးဆေးအလွှာတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်, အလူမီနီယံပေါ်ရှိဓာတ်သည်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိခံနိုင်ရည်ရှိသည်, ၎င်းကိုယေဘုယျအားဖြင့်ရွှေရောင်သို့မဟုတ်ငွေရောင်ရုပ်ရှင်ဖြင့်အစားထိုးသည်.
optical disc ၏ရုပ်ရှင်အလွှာကိုလည်းအလွှာများစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်. ၎င်းကိုအရောင်ဆိုးထားသောအလွှာပေါ်တွင် 30nm အထူသံ-ကိုဘော့အလွိုင်းမှတ်တမ်းတင်အလွှာဖြင့်အုပ်ထားသည်, amorphous rare earth transition elements များနှင့်ရောစပ်ထားသည်, ပြီးရင်aနဲ့အုပ်လိုက်ပါ 20 ၁၀၀ မီလီမီတာအထူရှိသောဆီလီကွန်နိုက်ထရစ် dielectric အလွှာအထိ. နောက်ဆုံးတွင်အလူမီနီယမ်ရောင်ပြန်လွှာဖြင့်အုပ်ထားသည်.
ဤအီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များသည်သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများရရှိရန်လိုအပ်ပြီးအချက်အလက်များကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်, ဤလုပ်ဆောင်ချက်များအောင်မြင်ရန်, အမျိုးမျိုးသောဝတ္ထုများဖြင့်ရိုက်ခတ်ထားသောရုပ်ရှင်ကိုမှီခိုရန်လိုသေးသည်, ရုပ်ရှင်ပြီးသည်နှင့်ပြသသောကြည်လင်သောပြည်နယ်များ၏အစဉ်လိုက်။.
အကြို: sputtering ပစ်မှတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ
နောက်တစ်ခု: cylindrical နှင့် planar magnetron sputtering ပစ်မှတ်များ၏အားသာချက်များ